China DCME All-in-one Gateway ifektri kanye nabaphakeli | Yunke
I-DCME All-in-one Gateway
I-DCME isizukulwane esisha sesango lokuvikela ukusebenza okuphezulu sisebenzisa iprosesa ephezulu yokusebenza okuphezulu, kuhlanganiswe ne-chipset ye-ASIC ezinikele. Ngokusebenza okuphezulu namandla wokucubungula idatha, i-DCME isebenza nge-wire-speed throughput kanye nenombolo ehamba phambili embonini yokuxhuma okusha ngokuqhathaniswa ne-firewall yendabuko ne-broadband router. I-DCME ihlanganisa i-broadband router, i-firewall, iswishi, i-VPN, ukuphathwa kwethrafikhi nokulawula, ukuphepha kwenethiwekhi, isilawuli esingenantambo futhi kulula ...
I-DCME isizukulwane esisha sesango lokuvikela ukusebenza okuphezulu sisebenzisa iprosesa ephezulu yokusebenza okuphezulu, kuhlanganiswe ne-chipset ye-ASIC ezinikele. Ngokusebenza okuphezulu namandla wokucubungula idatha, i-DCME isebenza nge-wire-speed throughput kanye nenombolo ehamba phambili embonini yokuxhuma okusha ngokuqhathaniswa ne-firewall yendabuko ne-broadband router. I-DCME ihlanganisa i-broadband router, i-firewall, iswishi, i-VPN, ukuphathwa kwethrafikhi nokulawula, ukuphepha kwenethiwekhi, isilawuli esingenantambo kanye nokumiswa okulula. Ilungele amabhizinisi amancane naphakathi, izikole, uhulumeni, izitolo zamaketanga, amathilomu aphakathi nendawo we-Intanethi, opharetha nenye inethiwekhi eyinkimbinkimbi.
Ukusebenza okuqinile ngaphansi kwezakhiwo zehadiwe ezithuthukile
Isango lezokuphepha le-multi-core le-DCME lisebenzisa amaprosesa we-multi-core, injini yokushintshela esheshayo ye-ASIC eyenza yonke ipulatifomu yehardware isebenze kusakhiwo se-Ethernet esisheshayo. Lo mklamo osebenza kahle kakhulu wenza ukuthi umshini uzalwe ngokusebenza okuphezulu futhi unikeze isiqinisekiso sokwakheka kwedatha yokuthola idatha nokusebenza okuthembekile kokuphepha nokuvikela, i-firewall / i-VPN, i-IPv6, nokunye ukusebenza kwesoftware ecebile engenhla.
Ukulawula ukugeleza okunembile nokuphathwa kokuziphatha
I-DCME inikeza izinqubomgomo zokulawula ukugeleza okunembile ngokususelwa kuzinhlelo zokusebenza, amakheli e-IP, ababhalisile, izivumelwano, njll, futhi kusethwe umkhawulo, ubuncane, umkhawulokudonsa oqinisekisiwe ku-uplink ne-downlink. Ama-protocols angaphezu kwama-200 angakhonjwa nge-DCME ukusetha isiqinisekiso somkhawulokudonsa, ukulawulwa komkhawulokudonsa ngokuya ngomthetho olandelwayo ocacisiwe. Ngomkhawulo wesikhathi se-NAT onembile, usongo lwezinombolo zeseshini eziphezulu ezibangelwe yizinqubo eziningi zokulanda amathuluzi nokuhlaselwa kwamagciwane.
Imisebenzi ye-firewall ecebile
I-DCME inamandla amakhulu okulwa nokuhlasela. Ngezibalo ezinemininingwane nokuhlaziywa okunembile kumaphakethe ahlukahlukene anjenge-ARP, i-IP, i-ICMP, i-TCP, i-UDP, nezinye izinhlobo zamaphakethe, ukuhlaselwa kungatholakala futhi kuvinjwe kufaka phakathi i-SYN Flood, i-DDoS, ukuhlaselwa kwamaphakethe we-IP, ukuhlaselwa kwekheli le-IP, njll. Futhi imininingwane ye-alamu ingahlinzekelwa ukwenza ukuphathwa kwenethiwekhi yakho kuvikeleke kakhulu.Isekelwe kubuchwepheshe bokubona obuthuthukile bombuso, i-DCME inikeza izindlela ezinamandla zokulwa ne-ARP ezibandakanya ukubopha kwe-IP + MAC, ubuchwepheshe bokuskena kwe-ARP, ukufunda i-ARP okuthembekile, ukuhlunga i-ARP. Ukubopha kwe-IP / MAC nokulwa ne-anti-ARP phakathi kwamakhasimende namadivayisi kungenziwa ngokuzenzakalela.
Isilawuli sokufinyelela esihlanganiswe kakhulu
Isango lokuphepha le-DCME lingasetshenziswa njengesilawuli sokufinyelela ukusetha inethiwekhi engenantambo enamadivayisi we-DCN AP. Ngokususelwa kubuchwepheshe beqoqo lokuphathwa kwe-smart, i-DCME ingaqapha inani le-RF endaweni ye-AP ngayinye futhi ilungise amandla wesiginali nesiteshi se-AP ngayinye ngokuzenzakalela ngokuya ngenombolo yomsebenzisi noma inqubomgomo yokulinganisa ibhalansi. Ngasikhathi sinye, inganciphisa ukuphazanyiswa kwamasignali angenantambo ukuthola ibhalansi yomthwalo nokuzinza kwenethiwekhi engenantambo futhi inikeze isixazululo esifanelekile samanethiwekhi aphakathi nendawo / amancane angenantambo kanye namagatsha ebhizinisi elikhulu.
Ukuphathwa kahle nokugcinwa kahle
Isango lezokuphepha leDCME lisebenzisa ukuphathwa okucacile kwekhasi leWebhu. Kudingeka izinyathelo ezintathu kuphela ukuxhuma i-DCME kunethiwekhi ne-wizard yokumisa.
Izindlela ezahlukahlukene zokuqapha, kufaka phakathi ukuqapha ukusebenza, ukwethuka okwehlulekayo, isexwayiso segciwane / lokuhlasela, njll, nezibalo nolwazi lokusekwa olususelwa kumkhawulokudonsa kanye neseshini kusekelwa abaphathi nokugcinwa kalula.
Ingxenye #: DCME-320-L
Ingxenye #: DCME-520-L
Ingxenye #: DCME-520
I-4G DDR III
I-10/100 / 1000M Isisekelo-T
SFP / RJ45 Ibhokisi
1 RS-232 (RJ-45) console, 2 i-USB2.0 port
Isimo se-Power / system Run / port
Ukusebenza 0 ℃ -40 ℃
Isitoreji -20 ℃ -65 ℃
Ukusebenza okungu-10% -85% Ukungavumeli
Isitoreji 5% -95% Ukungavumeli
Abasebenzisi Abaphakanyisiwe Abasondelene
Ukuphakama Komkhawulokudonsa Ophakanyisiwe
Isikhathi esisha ngomzuzwana
Iseshini enkulu ngasikhathi sinye
Isiteshi se-Max IPSec
Abasebenzisi bokufinyelela be-Max L2TP
Abasebenzisi bokufinyelela be-Max SSL VPN
Abasebenzisi bokufakazela ubuqiniso be-Max Web
Isilawuli sokufinyelela se-Wi-Fi
Ama-AP aphathekayo azenzakalelayo
Ama-AP aphethwe kakhulu
Umzila / i-NAT / iBhuloho
Inethiwekhi Iklayenti le-PPPoE, i-PPPoE chap / pap / noma yiziphi izindlela ezintathu zokufakazela ubuqiniso, ukuxhumeka kabusha kweklayenti le-PPPoE
I-DHCP Server, iKlayenti, ukudluliswa
Iseva ye-DNS, ummeleli
Umzila Static, umzila static nge kuqala, RIP
I-PBR (isuselwa kukheli lomthombo, imbobo yomthombo, ikheli lendawo oya kuyo, umthetho olandelwayo, namanye amasu), isekela i-IP ye-hop elandelayo noma i-interface
Ukulinganisa umthwalo olinganayo wemizila eminingi, nomthwalo we-bandwidth ulungisa ngokuzenzakalela inani lomzila ngamunye, ukufeza ukulinganisela komthwalo ngokususelwa kulayini.
Umsebenzi wesipele we-Multilink, ukutholwa kwesixhumanisi sesimo sesixhumanisi, nokushintsha okuzenzakalelayo nokubuyela emuva phakathi kwezixhumanisi
Umthombo NAT Static / Dynamic
1: 1 NAT1: N NATN: N NATUkulinganisa Umthwalo Weseva
I-Multi-protocol NAT ALG
Ukuhlolwa kwepakethe okujulile
Lawula futhi ukhawulele umkhawulo kuhlelo lokusebenza oludumile lwe-P2P kufaka phakathi i-BT, eMule, eDonkey
Lawula futhi ukhawulele umkhawulo kuzinhlelo zokusebenza ezidumile ze-IM kufaka phakathi i-Yahoo, i-GTalk, njll.
Ukuhlunga i-URL, ukuhlolwa kwe-QQ
Ukulawulwa komkhawulokudonsa okususelwa ku-IP
Ukulawulwa komkhawulokudonsa okususelwa kuhlelo lokusebenza
Ukulawulwa komkhawulokudonsa okususelwa ekugelezeni
Isiqinisekiso somkhawulokudonsa, ukubhuka komkhawulokudonsa, ukwabiwa komkhawulokudonsa okuguqukayo
2 amazinga wokulawulwa komkhawulokudonsa (i-IP nokulawulwa komkhawulokudonsa wohlelo lokusebenza, okususelwa ethekwini)
Izindlela zokuvikela i-ARP (ukufunda i-arp, i-arp yamahhala, ukuvikelwa kwe-arp)
Ukubopha kwe-IP-MAC, okwenziwa ngesandla nokuzenzakalelayo
Ukuvikelwa kokuhlaselwa kwe-DoS, DDoS
Ukuvikelwa kwesikhukhula: Isikhukhula se-ICMP, isikhukhula se-UDP, isikhukhula seSYN
Imibuzo ye-DNS ukuvikelwa kwezikhukhula: imibuzo ye-DNS kanye nokuvikelwa kombuzo okuphindayo kokuvikelwa kokuhlasela kwezikhukhula
Ukuvikelwa kwepakethe okungalungile
Ukutholwa okungahambi kahle kwe-IP, ukutholwa okungahambi kahle kwe-TCP
Ikheli le-IP kuthwebula ukusivikela kokuhlasela, ukuvikelwa kokuthwebula kwitheku
Ukwenqatshelwa Ukuvikelwa Kwensizakalo: I-Ping of Death, Teardrop, ukwahlukaniswa kwe-IP, izinketho ze-IP, iSmurf noma iFraggle, Umhlaba, iphakethe elikhulu le-ICMP
ngokususelwa kusixhumi esibonakalayo, i-IP yomthombo, i-IP okuyiwa kuyo, nezinhlelo zokusebenza (amaseshini amasha ngomzuzwana nenombolo yamaseshini afanayo)
Ukulawulwa kweseshini yesikhathi
Ukuphathwa kwe-Wi-Fi, ukumiswa, ukuqapha
Ukuthuthukiswa kwe-Firmware nge-WEB ne-TFTP
Ukulungiselela ukwenza isipele nokubuyisela esimweni
I-SNMPv1 / v2
I-HTTPS \_ HTTP \_ TELNET \_ SSH
Iwizadi yokumisa iwebhu
Ukuphathwa kwento kususelwa kumakheli we-IP, izivumelwano, ishejuli, kanye nesixhumi esibonakalayo
Ukungena nokuqapha izibalo
Ukuqapha kanye nezibalo kwi-interface traffic
Ukuqapha kanye nezibalo ku-IP traffic
Ukuqapha kanye nezibalo kunombolo yeseshini ngokuya ngekheli le-IP
Ukuqapha kanye nezibalo kumkhawulokudonsa nenombolo yeseshini kususelwa kuzinhlelo zokusebenza
Ukuqapha kanye nezibalo ngenani lokuhlaselwa
Ukuqapha kanye nezibalo ku-IP, ukusetshenziswa, nokuhlaselwa kususelwa ku- Ukuphepha isizinda
I-log yomcimbi / irekhodi lomgwaqo / ilogi yokumisa / ilogi ye-alamu / ilogi yezokuphepha
Isipele sokungena se-USB
Ukuthembeka okuphezulu Ukulinganisa umthwalo wesixhumanisi sokusekela, isipele sesixhumanisi
Inqubo yokuthola ukwehluleka kwezixhumanisi eziningi
Isicelo Esijwayelekile 1: Export Gateway, sihlanganisa imisebenzi ye-broadband router, firewall, traffic management kanye nokulawula, ukuphepha kwenethiwekhi.
Isicelo Esijwayelekile 2: Yakha uxhumano lwe-VPN phakathi kwendlunkulu namagatsha
Ingxenye #: DCME-320-L Isango elihlanganisiwe le-DCME-320-L, elinezici ze-broadband router, firewall, switch, i-VPN, ukuphathwa kwethrafikhi nokulawula, ukuphepha kwenethiwekhi, isilawuli esingenantambo, esinamachweba we-8 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * I-USB2.0. okuzenzakalelayo ngamayunithi ama-2 welayisensi ye-AP, ukwesekwa okulawula ubuningi bama-APs angama-32, kuphakamisa abasebenzisi abangama-300.
I-DCME-320 (R2) Isango elihlanganisiwe le-DCME-320 (R2), elinezici ze-broadband router, firewall, switch, i-VPN, ukuphathwa kwethrafikhi nokulawula, ukuphepha kwenethiwekhi, isilawuli esingenantambo, esinamachweba we-8 * 10/100 / 1000M Base-T, 2 * 1000M Combo , 1 * Ikhonsoli, 2 * USB2.0. okuzenzakalelayo ngamayunithi ama-4 welayisensi ye-AP, ukwesekwa okulawula ubuningi bama-AP ayi-64, kusikisela ubuningi babasebenzisi abangama-500.
Ingxenye #: DCME-520 -L I-DCME-520-L ihlanganisa isango, nezici ze-broadband router, i-firewall, iswishi, i-VPN, ukuphathwa kwethrafikhi nokulawula, ukuphepha kwenethiwekhi, isilawuli esingenantambo, esinamachweba we-6 * 10/100 / 1000M Base-T, 1 * Console, 2 * I-USB2.0. okuzenzakalelayo ngamayunithi ayi-6 welayisensi ye-AP, ukwesekwa okulawula ubuningi bama-APS angama-256, kusikisela ubuningi babasebenzisi abayi-1000-1200.
Ingxenye #: DCME-520 I-DCME-520 ihlanganisa isango, nezici ze-broadband router, firewall, switch, i-VPN, ukuphathwa kwethrafikhi nokulawula, ukuphepha kwenethiwekhi, isilawuli esingenantambo, esinamachweba we-9 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Ikhonsoli, 2 * USB2.0. okuzenzakalelayo ngamayunithi ayi-12 elayisense le-AP, ukwesekwa okulawula ama-max.512 APs, kusikisela ubuningi babasebenzisi be-2000.
DCME-720 I-DCME-720 ihlanganisa isango, nezici ze-broadband router, firewall, switch, VPN, traffic management and control, network security, wireless controller, enamachweba ayi-17 * 10/100 / 1000M Base-T, 4 * 1000M Combo, 1 * Ikhonsoli, 2 * USB2.0. Phakamisa abasebenzisi abangama-5000.
Ingxenye #: DCME-AC-10 Ilayisense yokuthuthukisa abaphathi be-AP (ilayisense lama-AP ayi-10)